Fampiharana ara-teknika momba ny milina cnc | ny bilaogy | PTJ Hardware, Inc.
Home > Blog > Fampiharana ara-teknika
Ny fanondro ho an'ny very Foam Castings Cost Accounting
Ny fandalinana ny vidiny dia tena tsotra ary mety ahitana lafin-javatra roa, izany hoe ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny fihenan'ny vidiny. Ny tsy fitovizan'ireto lafin-javatra roa ireto dia ny habetsaky ny fiakaran'ny vidiny na ny fihenany aorian'ny fizotran'ny fizotran'ny fanary foam.
Ny fampiharana ny famokarana manan-tsaina amin'ny foam very
Nanomboka nianatra famokarana manan-tsaina ny orinasanay tamin'ny taona 2014, ary vokatry ny fikarohana maro no nampiharina tamin'ny vokatray. Indrindra fa tamin'ny Desambra 2020, ny orinasanay dia nanao sonia tsipika famokarana foam very manan-tsaina miaraka amin'i Maanshan Haitian Heavy Industry, izay hampihatra tanteraka ny vokatra famokarana manan-tsaina ao anatin'ny taona vitsivitsy amin'ity tsipika famokarana ity.
Ny anjara asan'ny coating amin'ny fizotran'ny famokarana foam casting very
Ny efitrano fanamainana manokana dia ampiasaina hampitomboana sy hitazonana ny mari-pana amin'ny efitrano fanamainana amin'ny alàlan'ny fandoroana arina, entona, herinaratra, geothermal, etona, sns., ary ny fitaovana manokana dia ampiasaina amin'ny famoahana ny hamandoana mba hahatratrarana ny vokatry ny tsy fahampian-drano, ny fanamainana ary ny fanamainana. .
Ireo faritra fampiharana hafa amin'ny sombin-kazo voahidy
Ny fantsom-pamokarana mazava ho azy dia an'ny ampahany nohomboan'ny vy, izay karazana faritra amin'ny lohataona masinina izay miasa amin'ny elastika. Izany dia an'ny sokajy fitaovana elektronika fitaovana. Ny fonosana mazava tsara amin'ny fitaovana dia vita amin'ny vy na manganese aorian'ny fitsaboana hafanana
Ny fomba fanadiovana ny Manipulator indostrialy
Firenena mpamokatra lehibe i Shina, ary mihena tsikelikely ny dividendam-pamokarana nentim-paharazana. Ny fanoloana ny famokarana tanana amin'ny milina dia nanjary fironana tsy azo ihodivirana amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy, ary ny robot indostrialy koa mitana andraikitra lehibe. Mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny robot, ny mpampiasa dia tsy maintsy mitazona sy manadio ny manipulator. Ka inona avy ireo fomba fanadiovana an'ilay manipulator?
Ny fisafidianana sy ny famolavolana ny fomban'ny Manipulator
Ao amin'ny drafitra famolavolana ny manipulator, misy safidy maro amin'ny fikajiana fomba. Inona no fomba fikajiana hisafidianana, ankoatry ny fandinihana ny firafitra, dia bebe kokoa momba ny vidin'ny fampiasana sy ny fanamorana ny fikojakojana. Diniho, rehefa dinihina tokoa, ny zavatra tsara iray dia mila raisina ho mahomby.
Fikarohana momba ny teknolojia Niova Si-Alloy Slender Shaft
Izy io dia fitaovana sarotra zahana ary be mpampiasa amin'ny aerospace, fiaramanidina ary sehatra hafa. Ny fanapahana azy dia teboka sarotra amin'ny teknolojia maoderina. Ny fampifangaroana ny toetra mampiavaka ny firavaka nickel-silicon, ny fakana ohatra ny fifandraisana amin'ny firaka nickel-silicon an'ny orinasa, ny teknolojia fanodinana fihodinana dia nianarana, ary ny teknolojia fanodinana alim-bary avo lenta dia natokana ho an'ny atrikasa, izay manana fampiharana sanda.
Ny fampiharana ny rafi-servo AC Servo ao anaty tsipika famolavolana mangatsiaka
Ny fampidirana ny fizotran'ny paikady mialoha sy ny teknolojia fanetezana hydraulic amin'ny tsipika famokarana miorina amin'ny hatsiaka amin'ny tsanganana tsy dia manitatra ny endrika famolavolana sy ny fahamendrehan'ny famolavolana ny tsanganana miampita amin'ny tsanganana, fa mahafeno ny fepetra takian'ny ny famolavolana sy ny fivorian'ny rafitry ny rafitra vy, ary manatsara
Fisafidianana ny fotoam-piasan'ny masinina
Amin'ny dingan'ny fametrahana crane lehibe dia hiova ny fisosan'ny crane flange. Ny fomba fanao mahazatra dia ny milina ny fiaramanidina flange aorian'ny fivoriambe sy ny fikajiana ny valin'ny crane base, mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny sary ny famolavolana.
Ny anjara asan'ny mpanonta 3D amin'ny fanaovana maodely Prototype
Amin'ny ankapobeny, ny vokatra namboarina dia tsy azo vokarina mivantana. Raha vantany vao misy lesoka izy ireo, dia hofongorana, izay mandany ny herin'olombelona, ​​ny loharanon-karena ary ny fotoana. Ny prototype dia ny dingana ilaina hanamarinana ny fahaizan'ny famolavolana amin'ny fizotry ny fampandrosoana ny vokatra. Izy io dia fomba mivantana sy mahomby hijerena ireo lesoka, tsy fahampiana ary lesoka amin'ny vokatra namboarina, mba hanatsarana ny lesoka. Fitaovana fanodinana mahazatra ho an'ny maodely prototype dia misy ny fitaovana milina fanaraha-maso isa an'ny CNC, mpanonta 3D, ary milina bobongolo vita amin'ny silika.
Ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny teknolojia famolavolana kofehy
Amin'ny fampivoarana sy ny fampiharana ny teknolojia famolavolana kofehy, ny tombony amin'ny fahamendrehana avo lenta, ny kalitao milamina ary ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta dia ampiasaina amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana. Heverina fa manana fahamendrehana avo lenta amin'ny fitaovana fametahana tariby manokana. Ny fiasan'ny herinaratra anaty motera anatiny dia mahatonga ny mpikambana misy kofehy Milalao anjara asa lehibe amin'ny fananana mekanika.
Ny fanaraha-maso kalitaon'ny Cnc Machining an'ny Hub an'ny kodiarana fiara
Noho izany, ity lahatsoratra ity dia hanambatra ny toe-java-misy eo amin'ny milina fiara fitateram-bahoaka amin'izao fotoana izao, mikendry ireo anton-javatra izay misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny masinin-jotram-piaramanidina, ary hizaha ny fomba fanatanterahana ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny fanaraha-maso ny masinina mpamokatra fiara.